Castle Nístějka avy amin'ny avo, Febroary 2018 - PetrPikora.com
Castle Nístějka avy any ambony, Febroary 2018
PetrPikora.com on Febroary 17, 2018
Free download (Ampio aho amin'ny tetikasa hafa) amin'ny famaritana avo.
Mijery ahy amin'ny YouTube famandrihana amin'ny.
Nístějka dia rava iray amin'ny làlambe iray eo amin'ny làlambe ambonin'ny fihaonan'ny Reniranon'i Jizera sy ny Farský potok ary mifanohitra amin'ny lalana I / 14, ao amin'ny faritry ny anarana mitovy. Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy. Ny Keramika dia manaporofo ny fisian'ny olombelona na dia ao anatin'ny 17 aza. St. Fiarovana miorina amin'ny tilikambo boribory, lapa sy toerana sisa tavela amin'ny manda. Ny sisa tavela amin'ny lapa dia voaro ho tsangambato ara-kolotsaina ao amin'ny Repoblika Tseky.
Azo inoana fa niorina tamin'ny tapany voalohan'ny taonjato faha-14 ny tranobe, saingy tsy nisy loharanom-baovao nosoratana momba ny fiandohany. Na izany aza dia mety ho Heník z Valdštejna ny mpanangana azy, izay efa nanoratra hatramin'ny 1369 taorian'io. Hatramin'io taona io dia ny filazana voalohany momba ny lapa. Ny fiarovana ny lapa dia mety hitandrina ny làlana tany amin'ny Lohasahan'i Jizera. Fa rozvětvenost Waldsteins ny tsy fisian'ny loharanom-baovao voasoratra izay sarotra ny hamaritra izay tamin'izany andro izany tompon-trano mimanda. Ny azo antoka dia hoe ao 1399, rehefa nanoratra Nístějce Hynek ny Wallenstein sy any 1406 Henry. Na izany aza, efa an-taona nanaraka dia nisy ny foiben'ny Henri avy any Wartenberg, izay efa nahazo in 1404 Castle Wallenstein. Ao amin'ny 1422 avy eo Nístějka andrianan'ny Jenštejna tsirairay avy. Wenceslas of Jenštejn ary nanaraka azy Mikuláš z Jenštejna. Ny taona 1459 maty sy ny zava-mitranga dia noho ny tsy fisian'ny loharanom-baovao voasoratra tsy fantatra, toy izany koa ny zava-nitranga manaraka ireto ary tsy misarom-boaly ny fikarohana natao tao 1958 Bohemian Avaratra Museum in Liberec.
Nandritra ilay fikarohana, izay nifantoka indrindra tamin'ny faritry ny lapan'ny lapa, dia nisy sarina fitambarana valo izay nambara, ary ny lapa izay manana roa ka hatramin'ny telo. Ao anatin'io lafin-javatra io dia misy ravinkazo misy ravaka madinika sy zavatra vita amin'ny vy (indrindra amin'ny fantsika sy ny valanoranony). Ny firafitry ny tavy sy indrindra ny fizotrany dia tarihan'ny talen'ny fikarohana momba ny arkeology PhDr. Jaroslav Kavan dia nanatsoaka hevitra fa azo inoana fa nijoro tao amin'ny tapany faharoa tamin'ny 15 izy taorian'ny nanjavonan'ilay lapa. taona, nandritra ny fotoana nirodana ny tokotanin'ny palace.
Ny fe-potoam-pandrosoana dia tohanan'ny anaran'ny 1519, raha efa lazaina ho lao i Nístějka. Efa ao amin'ny 1492, ny officier Rajk teo aloha, Racek Sugar avy Tamfeld, dia voatonona ho "tompon'ny lova navelan'i Navarre sy ny entan'ny Nesté". Satria tsy misy filazana momba ilay lapa (nosoloana ny entana), dia azo fohifohy fa tsy i Nístějka intsony tamin'izay fotoana izay. Amin'ny ankapobeny dia mbola misy ny fahafaha-misakafo noho ny fahafatesana tampoka an'i Mikuláš z Jenštejn.
Please miandry ...
4K4k Videodji mavicdji mavic prodrônadrônahradBurgenlandJablonec nad JizerouMountainskvadroptéraNístějkasisa tavela
manoratra ny fanehoan-kevitra hanafoana ny valin-
Tsy havoaka ny adiresy mailakao. Ilaina ny fampahalalana takiana *
Ampahafantaro ahy ny fanehoan-kevitra vaovao amin'ny mailaka.
Ampahafantaro ahy amin'ny lahatsoratra vaovao amin'ny mailaka.
Avelao foana tsy mitondra fanatitra an-tsaha ity
5 famantaranandro lasa izay
22 famantaranandro lasa izay
Mipetraka amin'ny lakandranon'i Český ráj